असुरक्षित मोटरसाइकल, चालु आ.व.मै ६० मोटरसाइकल हराए - Kohalpur Trends
असुरक्षित मोटरसाइकल, चालु आ.व.मै ६० मोटरसाइकल हराए
सडकमा पार्किङ्ग गरेर कामका लागि फर्केर आउँदा हुँदैन मोटरसाइकल । लकडाउन पछि बाँकेमा मोटरसाइकलको चोरी बढ्दै गएको पाइन्छ । मोटरसाइकलको इन्स्योरेन्स भएकाले ढिलोचाँडो त्यसको क्षतिपूर्ति पाउँछन् । तर, इन्स्योरेन्स नभएकाहरु उजुरी पछि प्रहरीले खोजिदिने आशामा बस्छन् ।
पछिल्ला दिन बाँकेमा मोटरसाइकल चोरीका घटना बढ्दै गएका छन् । त्यसको अर्को कारण लकडाउन पछि भएको देखिन्छ । भारतबाट चोरीको मोटरसाइकल नेपालगन्ज ल्याएर पहाडि जिल्ला पुर्याउने गिरोह लकडाउन पछि अवस्था असहज हुँदा नेपालगन्जमै चोरी गरेर पहाडि जिल्ला पुर्याउने गरेको प्रहरी अध्ययनले देखाएको छ ।
चालु आ.व.मा मात्रै करिब ६० वटा मोटरसाइकल हराएको उजुरी बाँके प्रहरीमा परेको छ । जसमध्ये आधा ३५ वटा मोटरसाइकल प्रहरीले फेला परी प्रहरीमा बुझाएको पाइन्छ । बाँके प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक ओम रानाले पछिल्ला दिन मोटरसाइकल चोरीका घटनाको उजुरी पछि त्यसको अनुसन्धान, निगरानी र कारवाहीका लागि विशेष प्रहरी टोली गठन गरेर परिचालन गरेको बताउँछन् । ‘मोटरसाइकल चोरी गर्नेले पाटपुर्जा फेरबदल गर्ने, चेसिस नं. नै बदल्ने, मोडिफाइ गरिदिने, नम्बर प्लेट चेञ्ज गर्ने भएकाले तत्कालै समात्न समस्या हुने गरेको छ’, उनले भने । प्रहरी प्रमुख रानाले चोरी गर्नेको च्यानल र गिरोह नै सक्रिय रहेकाले त्यसलाई ट्रयापमा पार्न प्रहरीले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
६ मोटरसाइकल सहित ६ अभियुक्त पक्राउ
मोटरसाइकल चोरीका घटना बढ्दै गएपछि खोजीका लागि बाँके प्रहरीले मोटरसाइकल चोर्ने गिरोह खोज्न विशेष टोली गठन गरेको छ । प्रहरीले गठन गरेको विशेष टोलीले ६ वटा मोटरसाइकल सहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बाँके प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक ओम रानाले विभिन्न जिल्लाबाट चोरीका मोटरसाइकल र त्यसमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी नेपालगन्ज ल्याएको जानकारी दिएका छन् । उनले थप मोटरसाइकल र संलग्नहरु पक्राउ पर्ने क्रममा रहेको जानकारीदिएका छन् ।
प्रहरीले राम बहादुर थापा, धिरेन्द्र विक्रम शाही, ईरसाद अहमद मुसलमान, छविलाल पुन मगर, नवराज रोका क्षेत्री, रंजित शर्मालाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी उपरीक्षक रानाले थापा र शाही मोटरसाइक चोर्ने र बेच्ने कार्यमा संलग्न रहेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको बताएका छन् । भारत तथा नेपालगन्जमा मोटरसाइकल चोरी गरी पहाडी जिल्लामा बेचिने गरेको प्रहरीले जानकारी दिएकोछ ।
प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा थापा र शाही मिलेर चोरी गरेको ११ मध्ये ६ वटा मोटरसाइकल फेला परेको जानकारी दिइएको थियो । प्रहरीका अनुसार, उनीहरुले मालापेट कार्यालय अगाडि, कोरियनपुर, होटल रोयल बाँके, बाँके गाउँ, हवल्दारपुर, बर्दिया मानखोला, कोशलपुर दश विगाह, बर्दिया र काँरकाँदोबाट ११ वटा मोटरसाइकल चोरेको खुलेको जानकारी दिएको छ । जसमध्ये ६ बरामद भई बाँकी बरामदको क्रममा रहेको प्रहरी उपरीक्षक रानाले बताए ।
मोटरसाइकल चोरले चोरिएका मोटरसाइकल जंगलमा लुकाउने र पहाडि जिल्ला लग्ने गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उक्त मोटरसाइकल वर्कशपमा लगि पाटपुर्जा तथा इन्जिन, च्यासिस नं. समेत बदलेर बिक्री गर्ने गरिएको प्रहरीले बताएको छ । मोटरसाइकलमा चोरीमा एउटा चोर्ने, अर्को पाटपुर्जा बदल्ने, ग्राहक खोज्ने र खरिद गर्ने च्यानल रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
थापा र शाहीले चोरेको मोटरसाइकल इरसाद र शर्माको वर्कशपमा पुर्याउने, त्यहाँ फेरबदल गर्ने जसको खरिद पुन र रोकाले गर्ने अन्यलाई बेच्ने गरेको पाइएको बताएका छन् ।
The put up असुरक्षित मोटरसाइकल, चालु आ.व.मै ६० मोटरसाइकल हराए appeared first on Nepalgunj News.
Previous Previous post: नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था द्वारा एक दिने अन्तरक्रिया
Next Next post: रोकिएला त एकल बिमा शुल्कको बेथिति ?